PHCN kwesịrị inye gị ọnwa atọ tupu ha achabie ọkụ - Ọkaiwu - BBC News Ìgbò
PHCN kwesịrị inye gị ọnwa atọ tupu ha achabie ọkụ - Ọkaiwu
Nkenke aha onyonyo Otụtụ ndị Naijiria na-atụ arịrị okpokpo ụgwọ ndị PHCN na-enye ha kwụọ kwa ọnwa
Ka onye ọkaiwu kpụpụchara onye Port Harcourt Electricity Distribution Company (PHEDC) ụlọikpe na Port Harcourt, o kwuola na ọ chọrọ ka ndị na-enye ọkụ latrik na Naịjirịa mara na ha agaghị na-achabi ọkụ etu masịrị ha.
Iwu dị n'obodo bụ na ndị na-enye ọkụ latrik na Naịjirịa a kpọrọ 'Power Holding Company of Nigeria (PHCN)' kwesịrị inye ohere ruru ọnwa atọ tupu ha abịa chabiri ọkụ onye ọbụla ji ụgwọ ọkụ.
Mana nke a akwụsịghị otu onye na-arụ na PHEDC ịchabi ọkụ latrik otu onye ọkaiwu bụ Higher King, nke mere ka ọ gbaa ya akwụkwọ n'ụlọikpe.
EEDC: Anyị akpaghị mita ọkụ aka
Ejima atọ anwụọla na Jigawa Steeti
King kwuru na ihe mere o jiri kpụpụ ya ụlọikpe bụ iji gosi ndị Naịjirịa ikike ha nwere site na 'Electric Power Reform Act 2006', ma kwụsị etu ndị na-enye ọkụ latrik na-esi achabi ọkụ etu masịrị ha, dịka os i megide iwu.
King gara n'ihu gwa BBC na "iwu kwuru na ha ga-enye gị ụgwọ ị ga-akwụ, ma oge ọgachara abalị iri,ha kwesịrị inye gị ozi na-ha ga-akwụpụ ọkụ gị ọnwa atọ tupu ha achabie ya.
Ndị Naịjirịa amaghị kemgbe a na ihe a bụ iwu nakwa na e nwere ike ịta gị ahụhụ ma ị mee ụdịrị ihe a. Ọ bụ mmebi iwua nke mmadụ nwere ike iji gaa mkpọrọ ọnwa atọ."
Nkenke aha onyonyo Ọkaiwu Higher King chọrọ ka ndị mmadụ mata ihe iwu NERC kwuru
King kwuru na ndị PHEDC chabiri ọkụ ya n'ụbọchị 16 nke Epreelụ ka ha wetachaara ya ụgwọ ọ kwesịrị ịkwụ n'ụbọchị 12.
Ọ gwara ha na ya na-agbagha ụgwọ ha wetaara ya maka na nke ha wetaburu bụ nke puku isii nke ọ kwụrụ tupu ha ewetakwara ya nke ọhụrụ ruru puku iri na asaa.
O gwara ha ka ọ kwụọ puku asaa mana ha jụrụ ya ma chabie ọkụ ya. Ya mere o ji gbaa ha akwụkwọ ma nwụchie onye ọrụ chabiri ọkụ ya.
Ọkaiwu na-anọchite anya King bụ Finjite Amachree kwuru sị: "Akụkụ iri itoolu na anọ (94) nke iwu NERC kwuru na onye ọbụla dara iwu dị n'ime ya nwere ike ịga mkpọrọ otu afọ maọbụ kwụọ otu puku narị (N100,000) maọbụ ha abụọ.
Nkenke aha onyonyo Finjite Amachree bụ onye ọkaiwu Higher King kwuru sị na iwu ndị NERC wepụtara machiri ịgbakọ ụgwọ ọkụ nke bekee kpọrọ 'estimated billing'
"Mana onye dara iwu a nke ugboro abụọ nke bekee kpọrọ 'second offender' nwere ike ịga mkpọrọ afọ atọ maọbụ kwụọ puku narị ise (N500,000) maọbụ ha abụọ. Mana ndị na-enye ọkụ latrik emebisiala iwu a site n'esoghị usoro a."
O kwukwara na ha na-agbagha ịgbakọ ụgwọ ọkụ nke bekee kpọrọ 'estimated billing' maka na ndị ụlọọrụ kwesịrị inye mita nke a ga-esi na ya na-enye ụgwọ a ga-akwụ, ma kwuo na iwu NERC machiri ịgbakọ ụgwọ ọkụ nke bekee kpọrọ 'estimated billing.'
Michael bụ onye PHEDC anwụchiri maka ihe a nọ na mkpọrọ na-eche mgbe ọ ga-apụta n'ụlọikpe ịzara ọnụ ya n'ụbọchị 23 nke ọnwa Mee.
Media captionE nweghị ọkụ na-emebiri anyị ihe
Ogbunigwe agbaala n'ime ụlọụka n'Enugwu steeti
Ndị Naijiria akpọọla oku ka a tọpụ Leah Sharibu
Vidio Uche Ogbuagu: Okwu m emeela ka ndị enyi gbaara m ọsọ